Maxaad Kala Socotaa Heshiiska Iskaashi Ee Ciidamada Somaliland iyo UK? – Codka Qaranka Tanadland
Maxaad Kala Socotaa Heshiiska Iskaashi Ee Ciidamada Somaliland iyo UK?
Taliyaha ciidamada ee Somaliland (S/G Ismaaciil Maxamed Shaqale) iyo taliyaha abaanduulka ciidamada Somaliland (Maxamed Aadan Saqadhi "Dabagale"), oo Taagan iridda dhexe ee kuliyadda saraakiisha ciidamada UK ee Sundhurst.
Taliyaha ciidamada Somaliland (S/G Ismaaciil Maxamed Shaqale) iyo taliyaha abaanduulka ciidamada Somaliland (Maxamed Aadan Saqadhi “Dabagale”), oo la taagan sargaal ka tirsan taliska sare ee wasaaradda gaashaandhiga Uk iyo madaxa kuliyadda saraakiisha ciidamad UK ee (Sundhurst).
Sida aan xog ku helay, Dowladaha Somaliland iyo UK waxay kala sixiixdeen bishii may ee sanadkaan aynu ku jirno 2016 heshiis muhiim ah. Taliska wasaaradda gaashaandhiga ee wadanka Somaliland waxay booqdeen horaantii bishii shanaad ee sanadkaan, xarunta wasaaradda gaashaandhiga ee bqortooyada ingiriiska. Halkaas oo ay kula sixiixdeen wasaaradda gaashaandhiga ee uk heshiis iskaashi oo dhanka ciidamada labada wadan ah. Dowladda Uk waxay jamhuuriyadda dimuquraadiga ah ee Somaliland ay ka codsatay inay maraakiibteeda dagaalka loo ogolaado inay ku soo xirankaraan dekadda Berbera, mar kasta oo ay u baahdaan. Taas bedalkeedana dowladda Uk waxay u balanqaaday inay ka taageeridoonto ciidamada beriga iyo badda ee Somalilan hub casri ah oo ay siiso.
Taliyaha ciidamada ee Somaliland (S/G Ismaaciil Maxamed Shaqale) iyo taliyaha abaanduulka ciidamada Somaliland (Maxamed Aadan Saqadhi “Dabagale”), oo sargaal sare oo ka tirsan taliska sare ee wasaaradda gaashaandhiga Uk iyo madaxa kuliyadda (Sundhurst) ay u sharaxayaan waftiga Somaliland, qaabka saraakiisha ciidamada Somaliland kuliyadda Sundhurst loogu tababaridoono.
Dowladda Uk waxay kaloo ay u balanqaaday dowladda Somaliland inay u tababarto ardayda ka soo baxa jaamacadaha Somaliland, ee raba inay ku biiraan ciidamada Somaliland. Iyada oo ardayda jaamacadaha Somaliland ka soo baxa ee raba inay noqdaan saraakiisha ciidamada Somaliland, ay tababar ku qaadandoonaan kuliyadda saraakiisha ciidamada UK ee Sundhurst. Kuliyadda saraakiisha ciidamada ee (Sundhurst) waxay u dhigantaa kuliyaddaha (West point) ee US iyo (General Staff Academy) ee wadanka ruush ka.
Sidaad ogsoontihiin, gobolada uu ka koobanyahay dalka Somaliland gobolka dal ahaan ugu balaarani waa gobolka sanaag. Gobalka sanaag sidoo kale waa gobol beelaha degaa ay ka badanyihiin beelaha gobolada kale ee Somaliland dega.
Gobolka sanaag beelaha dega iyo sida ay u kala miisaan weynyihiin hadaan tusaale idinka siiyo. Gobolka sanaag beelaha dega beesha ugu balaarani waa beesha (Habar-yoonis).
1) Habar-yoonis – Beesha Habar-yoonis sidoo kale waa beesha ugu degaanka iyo dadka badan beelaha Isaaq.
2) Habar-jeclo – Beelaha gobolka sanaag dega beesha labaad oo ugu badani waa beesha (Habar-jeclo).
3) Naaleeye Axmed – Sidoo kale beesha sadexaad ee gobalka sanaag ugu badani waa beesha (Naaleeye Axmed), oo ah beesha ugu badan beelaha Dhulbahante, xataa marka aan lagu darin beelaha kale ee Ugaaryahan.
4) Ugaaslabe “Bini-Jacfar” – Beesha Ugaaslabe magaalada Ceerigaabo iyo magaalooyinka ugu waaweyn ee bariga gobolka sanaag sida (Laasqoray) iyo (Hadaaftimo) ayey degtaa. Waana beel beecmushteri balaaran leh oo gobolka sanaag iyo Somaliland oo dhan miisaan weyn ku leh. Taas waxaa ka sii muhiimsan beesha Ugaaslabe “Bini-Jacfar” waa qawmiyad la siman beelaha (Isaaq),(Daarood) iyo (Hawiye) oo lagu qadariyo inay tahay beel dhex-dhexaad ah oo soomaalida oo dhan xiriir wanaagsan la leh, tixgelin iyo qadarin gaar ahna beelaha soomaaliyeed oo dhami ay u hayaan.
Beesha Ugaaslabe waxay leedahay labo isim oo kala ah suldaanka guud ee beelaha Ugaaslabe (Suldaan Axmed Suldaan Xassan Suldaan Axmed “Sanqoole”). Oo dowladda Somaliland ay u aqoonsantahay isimka guud ee degaamada bariga-sanaag. Isimka labaad ee beelweynta Ugaaslabe “Bini-Jacfar” waa (Garaad Axmed Maxamuud Maxamed). Mideeda kale ciidamada beesha Ugaaslabe “Bini-Jacfar” 20 kii sano ee ugu danbeeyey maadaama ay yihiin reer Somaliland xalaal ah laguna kalsoonyahay, waxay ciidamada Somaliland ay ku dhex yeesheen quwad ciidan oo aan la soo hunguriyenkarin.
Beelweynta Ugaaslabe “Bini-Jacfar” maadaama ay tahay beel miisaan siyaasadeed iyo beecmushteri balaaran ku leh Somaliland. Wasiirka gaashaandhiga ee Somaliland waxaa hayey mudo 11 sanadood ah (Axmed Xaaji Cali Caddami), oo ka soo jeeda beelweynta Ugaaslabe “Bini-Jacfar”. Gobalka sanaag ee ugu weyn gobalada Somaliland maaha gobal muran la gelinkaro. Beelaha hartiga ah ee tirada yarna dantoodu waxay ku jirtaa inay dowladda Somaliland ay u hogaansamaan. Isimada ugu miisaanka weyn bariga gobalka sanaag ee beesha Ugaaslabe “Bini-Jacfar” sida (Suldaan Axmed Suldaan Xassan Suldaan Axmed “Sanqoole”) iyo (Garaad Axmed Maxamuud Maxamed). Beesha Harti kuma ay laha gobolka sanaag isimo miisaan culus oo sida ay Somaliland u tixgeliso isimada beesha Ugaaslabe loo tixgeliyo.
Mudo haatan laga joogo labo sanaddood waxaan qoray maqaal aan ugu magacdaray “Beesha Warsangeli Oo Laguqasbay Inay kala Doortaan Raacida Somaliland Iyo Inay Gobolka (Bini-Jacfarland) Ee Bariga Sanaag Ay Ka Guuraan.” http://tanadland.com/getting-started-with-mobile-games/
Markaan maqaalkaas qoray waxay ahayd mar uu suldaanka beesha warsangeli uu ka soo cararay Somaliland oo uu laaji ku ahaa xaafadda magaalada Garoowe ay mahbarku ka degaan ee Horseed. Dabacan suldaanku waa nin Habar-majeerteen ah oo aysan ka suuroobin aana laga filankarin in uu mawqif adag qaato. Oo uu Dhabayaco bawdyo-kuus iyo Isaaq uu kala doorto midkii uu midiidin u noqonlahaa. Maadaama uusan tol lahayn oo uu nin Warsangeli ah yahay. Aniguna waxaan markaas islahaa suldaanka iyo beesha Warsangeli waxay samayndoonaan sida ay rabto beesha Ugaaslabe, oo waxay ka soo hor jeesandoonaan Somaliland. Waxaana odorasay in beesha Warsangeli iyo suldaankooduba ay mar aan fogeyn ay laajiyiin noqondoonaan, mar danbana indha aysan saaridoonin dhulkooda oo laga qixinayo. Laakiin (Suldaan Siciid) iyo beesha Warsangeli waxaad moodaad inay waanadaydii ay garawsadeen, oo hada beesha Warsangeli iyo suldaankooduba waxay raaciyad u noqdeen Somaliland.
Halkaan hoose ka daawo suldaanka beesha Warsangeli (Suldaan Siciid Suldaan Cabdisalaan) oo ka toobadkeenay midiidinnimadii uu midiidinka u ahaa naagaha Dhebayaco-bawdyogaab, Hadana garawsaday in isaga iyo beeshiisu ay u baahanyihiin Somaliland ee aysan Somaliland Warsangeli u baahnayn. Hadii aysan beesha Warsangeli daacad u noqon Somaliland na lagu fulinayo siyaasadda ah “Dad Baa Guura Ee Dhul Ma Guuro” oo degaamada ay ka degaan senaag bari laga qixinahayo. (Suldaan Siciid) oo magaalada Shimbiraale oo ay wada degaan beelaha (Ugaaslabe) iyo (Habar-yoonis), ee u mudooyinkaan danbe ku sugnaa ku soo dhaweynaya wasiiradii ay beeshiisu heshiiska kula gashay magaalada shimbiraale. Iyadoo u nuxurka heshiisku yahay in beesha Warsangali ay isudhiibtey Somaliland, Somaliland na ay aqbashay toobadkeenidda beesha Warsangeli ay toobadkeentay.